Taboo – Official Party Game Cheats&Kugura – Android Cheats Matipi
Taboo – Official Party Game Cheats&Kugura
Ndiyo yakanakisisa yemitambo yose yezwi! Kanda mabiko epamba pafoni yako uye tamba Taboo nevhidhiyo chat! Batanidza mukati 2 zvikwata uye mochinjana kutsanangura izwi – usashandise izwi kana chero mazwi ari pakadhi! Chikwata chako chinofanirwa kufungidzira mazwi akawanda sezvinobvira nguva isati yapera!
SaCharades uye Heads Up!, Taboo inonakidza kune vakuru uye vechidiki. Unotsanangura sei APPLE kana mazwi RED, FRUIT, PIE, CIDER neCORE zvese zvinonetsa? Kana iwe ukashandisa izwi rekupokana nekukanganisa, chimwe chikwata chichaita ruzha uye iwe ucharasikirwa nepoindi! Iva nekunakidzwa neruzha neshamwari dzako nemhuri. Iyo app inoshanda kana muri pamwe chete munzvimbo imwechete, kana kuparadzaniswa kuburikidza nevhidhiyo chat! The buzzer, timer, makadhi uye vhidhiyo chat inovakwa mukati – chaunoda chete foni yako. Funga nekukurumidza, taura nekukurumidza uye kupwanya makwikwi!
– IN-GAME Vhidhiyo CHAT – Iwe haudi mamwe maapplication kana skrini! Tamba mutambo wacho wakatarisana nawo 2-6 shamwari, chero kwauri!
– TAMBA MUMUMBA UMWE – Tamba Local Party Mode pafoni imwe, nevatambi vasingagumi!
– AD-MHAMBO YEKUSHANDISA – Nakidzwa ne zero ads kukukanganisa!
– VAVIRI-MUDZIDZO Mode – Dzvanya shamwari imwe ine yakasarudzika 2-Player Mode!
– 500 MAKADI – Inosanganisira makadhi kubva mumutambo wekutanga!
– EXTRA CARD PACKS – Tenga mafaro themed decks kuti mutambo wako urambe uri mutsva. Izvi zvinosanganisira:
Kunakidzwa & Mitambo
Vanhu vane mukurumbira
... uye maviri anonakidza Mystery decks!
Tanga mutambo uye koka shamwari dzako. Kana gadzira mu-app chat group neshamwari dzako uye tanga mutambo kubva pakutaura kwako!
Taboo mutambo we 2-6 online vatambi, ine vhidhiyo chat inosanganisirwa. Izvi zvinoreva kuti munogona kutamba makatarisana kunyangwe musingakwanise kuva pamwe chete. Unogonawo kutamba neshamwari dzakawanda sezvaunoda, mumunhu, ne Local Party Mode.
Kamurana kuita zvikwata zviviri
Kamurana kuita zvikwata zviviri wotumidza timu yako.
A Clue-giver anopihwa kubva kuChikwata A
Anopa ruzivo kubva kuchikwata A achasarudzwa neapp. Muchikamu chinotevera, mupi weClue kubva kuchikwata B achatora mukana wavo.
Iye Clue-giver anodhirowa kadhi
Chete mupi weClue kubva kuChikwata A, uye yese yeChikwata B, unogona kuona kadhi. Anopa Clue anofanira kuedza kuudza chikwata chavo kuti izwi chii, pasina kutaura chero mazwi eTaboo.
Chikwata B chinomira pedyo neBuzzer
Chikwata B chichaita ruzha kana mupi weClue akataura izwi rekuti Taboo!
Chikwata chako chinofanirwa kufungidzira mazwi akawanda sezvinobvira nguva isati yapera. Uchakunda 1 poindi pakufungidzira chaiko.
Unogona kusvetuka 2 makadhi kutendeuka kwese. Mushure maizvozvo, chimwe chikwata chichawana 1 nongedzera pese paunosvetuka kadhi.
Mutambo unopera kana mutambi wese atora chijana seClue-giver. Kana kuti apo chikwata chega chega chave nenhamba yakaenzana yekutendeuka seClue-giver.
Kana mese muri munzvimbo imwechete, unogona kutamba neshamwari dzakawanda sezvaunoda, kushandisa foni imwe chete!
– Batanidza mukati 2 zvikwata
– Chichinjanai kuti muve Mupi weClue
– Kana iwe uri Clue-giver, ita shuwa kuti timu yako haione iyo skrini
– Kana uri muboka rinopikisa, gara kana kumira kuseri kweMupi weClue wosheedzera kana vashandisa izwi rekusawirirana
– Iye Clue-giver anofanira ipapo kudzvanya buzzer
Iwe unogona zvakare kutamba neshamwari imwe mune maviri-Player Mode!
– Bvunza iwe pachako kana iwe ukashandisa izwi rekupokana
Iva tenzi weshoko uye urove muvengi wako wega.
Bata-up uye tamba neshamwari dzako, chero kwauri!
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: CheatsHack, mutambo, Official, Party, Taboo
← Cave Driller – Kubiridzira&Kugura Farmington: Yakanaka yekare MyFarm – Kubiridzira&Kugura →